Faayilii Walta'iinsa Gulaali
Kasaa Aabaa keessatti akka dabalamuuf tarree jechaa tokko uumi yk gulaali. faayiliin walta'iinsaa jechoota warra kaasa aabaa keessatti lakkoofsa fuulaa dabalachuun wabeefaman, bakka galmee keessaa mul'atanitti tarreessa.
Qabduu Hunda Barbaadii, bakka jechi itti mul'atu mara shoolessuudhaaf, qaaqa Barbaadi fi Bakkabuusi fayyadamuu, itti aansuudhaan, jecha sana fi bakkawwan kasaa aabaa keessatti ida'uuf ammoo, qaaqa Galfata Kasaa Saagi banuu nidandeessa. Haa tahu malee, tuuta kasaa aabaa innumti sun yoo galmeewwan hedduu keessatti si barbaachisa tahe, faayiliin walta'iinsaa, tokko tokkee jechaa naqa tokkittii galchuu, sana booda tarricha yeroo baayyee fayyadamuu ni hayyama.
Qaaqa Faayilii Walta'iinsaa Gulaalii itti seenuuf:
Sanduqa Akaakuu keessaa, "Kasaa Haala Aabaa" filadhu.
Bakka Filannoo keessaa, sanduuqa filannoo Faayilii walta'iinsa filadhu.
Qabduu Faayilii cuqaasiitii, kana booda, Haaraa yk Gulaalii filadhu.
Faayili walta'iinsaa, dirreewwan kanaan gaddii of keessaa qaba:
"Jecha barbadii" gara galfatoowwan kasaa isa ati akka galmee keessatti mallaateefamu barbaaddu wabeessa.
"Galfata filmaataa" gara galfatoowwan kasaa isa ati akka kasaa keessatti mul'atu barbaaddu wabeessa.
Furtuuwwanii 1ffaa fi 2ffaan galfatoota kasaatiif haadhoodha. "Jecha barbadii" yk "Galfata filmaataa" akka galfata xixiqqaa tokkootti qabduuwwanii 1ffaa fi 2ffaa jalatti mul'atu.
"Walsima qubee" jechuun, qubeewwan qubeeguddaaa fi qubee xixiqqaa ilallaa jechuudha.
"Jecha qofa" jechichaaf akka jecha tokkootti barbaada.
Filannoo "Walsima qubee" yk "Jecha qofa" dandeessisuuf, maadhee walitti dhufoo keessaa cuqaasiitii, kana booda sanduuqa filannoo filadhu.
Faayilii walta'iinsaa tokko malee qaaqa Faayilii Walta'iinsa Gulaalii uumuudhaaf:
Yammuu faayilii walta'iinsaa tokko uumuu barbaaddu, qajeelcha dhangii kanatti aanan fayyadami:
Tokkoon tokkoon galfataa faayilii walta'iinsaa keessaa sarara addaan-ba'aa irra jiru.
Sararootii yaaddi itti keename # eegalu.
Galfatootaaf dhangii kanaan gaddii fayyadami:
Galfatootii "Walsima qubee" fi "Jecha qofa" yoo duwwaa yk zero (0) ta'aan akka "Lakki" yk Sobbatti jedhuun hiikamuu. Qabeentootii ka birroo mari, akka "Yaa" yk Dhuggatti hiikamu.
Fakkenyaaf, jecha "Boston" jedhu galfata "Magaalootaatti" dabaluudhaaf, faayilii walta'iinsaa keessatti sarara kanaan gadii galchi.
yoo qubeewwan qubee xixiqqaan barreessame, akkasuuma "Boston" jedhu niarga.
aanaa "Beacon Hill" galfata "Magaalootaa" jalatti Boston keessatti dabaluudhaaf, sarara kanaan gadii galchi.
Title is: Faayilii Walta'iinsa Gulaali